Ogaden News Agency (ONA) – War Dagdag ah – Dagaal culus oo ka dhacay meel u jirta hal KM magaalada Dhagaxbuur iyo Raaf ka socda Qorahay
War Dagdag ah – Dagaal culus oo ka dhacay meel u jirta hal KM magaalada Dhagaxbuur iyo Raaf ka socda Qorahay
Dagaal adag ayaa shalay casarkii ku dhexmaray ciidanmka ONLF iyo qaar kamid ah masuuliyiinta maamulka degmada Dhagaxbuur oo wata ugu yaraan 70 xubnood oo ah maleshiyada degmadaas. Dagaalkan ayaa kadhacay meel udhaw magaalada Dhagaxbuur oo ah duleedka magaalada gaar ahaan inta udhaxeysa TAWLENE ama reer Wardheere iyo magaalada oo qiyaastii noqonaysa hal killomiter.
Ugu yaraan 9-sagaal xubnood ayaa la sheegayaa inay kadhinteen maleshiyada iyo maamulka degmada Dhagaxbuur halka aay qaar kalana ka dhaawacmeen. Dadkan dhaawaca ah ayaa waxaa kujira hogaankii nabadgalyada ee maamulka maagalada Dhaxgaxbuur. Dagaalkan ayaa wuxuu socday mudo laba saacadood ah, waxayna dadka dagan magaalada aad oola yaabeen iyadoo ciidamada federaalka oo intaas oo dhan maqlayey xabada aan wax gurmad ah u fidinin maleshiyadii iyo maamaulkii degmada Dhagaxbuur.
FG : Warar dheeraad ah ayaan ka sugaynaa gudaha Dhagaxbuur.
Wararka sidoo kale nagsoo gaadhaya gobolka Qoraxay Gaar ahaan xurnta gobolkaasi ayaa sheegaya in gobolka Qoraxay uu kasocdo raaf xoogan oo lagu hayo dadka dhalinyarada ah. Raafkan oo ku faafay guud ahaan gobolka ayaa lasheegayaa in dhalin yaro badan si qasab ah looga raafay Magaalooyinka iyo Tuulooyinka gobolka Qoraxay.
Inkasta oo ay adagtahay in lahelo wararka laxidhiidha raafka ay ciidamda Itobiya sida qarsoodiga ah uga wadaan gobolka ayaa lagu macneeyey in ay sabab u tahay kolkii ay meesha ka baxeen oo ay dabar go’een maleeshiyadii ka bar bar dagaalami jirtay ciidmada Itobiya, isla markaana ay diideen dhalinyarada inay is qoraan oo sidaasi daraadee si qasab ah loogu raafayo dhililyaro la askareeyo oo gabaad u noqota ciidamada Itobiya ee jooga Ogadenya iyo kuwa xataa jooga Somaliya oo la sheegayo inay Itobiya qorshaynayso inay iska hormariso maleeisyada loo yaqaano Liyu-Booliska ama Hawaarinta.
Raafka oo dhalinyaro farahabadan lagu raafay ayaa waxaa ka fakaday wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Ina Xasan Warmahaye, ayay ciidamda Itobiya Adhi gaadhaya 100 Neef ka dhaceen wiilkaasi ka fakaday Aabihii oo lagu magacaabo Xasan Warmahaye.
Saraakiisha TPLF ee joogta Gobolka Qoraxay ayaa ugu hanjabay dadka shacabka ah in ruuxii laga maqlo in la raafayo Dad dhalinyaro ah la dili doono.
Waan idin salaamay dhamaan. Bahdawarbaahita e jwxo waxaana idinku salaamay salaanta islaamka. Ee ah asc saan kadib wax inagu cusub in uu dhagax buur dagaalkadhaco iyo la is raa fi dabaqoodhi madhay jwxo NA dagaal dayn wayday. Mar Dan uu raafku u Ivan waan isalaamay bahda saxaa fada jwx0. Iam from joko east London